Kulanka maal-gashiga Soomaaliya oo Nairobi ka furmaya - Sabahionline.com
Waxaa qoray Bosire Boniface oo Nairobi jooga
Maajo 24, 2013
Shirka maal-gashiga Soomaaliya ee lagu qabanayo Nairobi ayaa daaqad naadir ah u furaya fursadaha ganacsi ee ka jira dib-u-dhiska Soomaaliya, sida ay sheegayaan qaban-qaabiyayaasha iyo maal-galiyayaasha shirka.
Shir gobaleed kor u qaadaya maal-gashiga Soomaaliya ayaa ka dhacaya Nairobi todobaadka soo socda. Kor, Xamaali Soomali ah oo alaab ka dajinaya markab taagan dekadda Muqdisho 24-kii Abriil. [Tony Karumba/AFP]
Iyada oo 28-29-ka May lagu qabanayo xarunta Shirarka Caalamiga ee Kenyattaayaa Shirka iyo Bandhigga Dib-u-dhiska iyo Maal-gashiga Soomaaliya uu noqonayaa shirkii ugu horeeyay ee ay hoggaaminayaan shirkadaha khaaska ah ee maal-gashiga Soomaaliya.
Shirkan maalgashi ayaa isu keenaya qorshe-dajiyayaasha iyo hay'adaha horumarinta, wuxuuna xoogga saarayaa xoojinta is-dhex-galka, xiriir sameeysiga, fursadaha ganacsiga iyo xidhiidh wadaaga mustaqbalka, ayay sheegeen qaban qaabiyaasha. "Soomaaliya kaligeed ma soo kaban karto, waxay u baahan tahay jaalayaal," ayuu yiri Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Nuur. "Shirkan ayaa fursad naadir ah u noqonaya kuwa raadinaya in ay ka qayb qaataan horumarinta Soomaaliya iyo guud ahaanba Bariga Afrika. Iyada oo xaaladda ammaanku uu soo hagaagayo, ayaaSoomaaliya ay diyaar u tahay maal-gashi, xaqiidaniina qofna iskama indha tiri karo mustaqbalkaas."
Shirkan, oo ay ogolaatay Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa doonaya in uu soo jiito maal-gashiyada, waddamada kala duwan, maal-galiyayaasha heerka gobol iyo heerka degaan ee diyaarka ah in ay Soomaaliya galiyaan raasumaal iyo khayraad kale, ayuu Nuur u sheegay Sabahi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku xisaabtaaysa ballan-qaadka ay maal-galiyaashu ka sameeyaan shirka, ayuu yidhi. Taas ayaa noqonaysa mid Soomaaliya ka kaalmeeysa in ay dhaqaale ahaan iyo isku-filaasho ahaanba u soo kabato, ayuu sheegay Nuur, isaga oo intaas ku daray in ay fursado ka jiraan dhinacyada macdan qodinta, baadhitaanka saliidda, bangiyada, biyaha, cunto helida, hoteelada iyo dhismaha guud.
Kumanaan Soomaali ah oo waddanka ka tagay xiligii dagaalka sokeeye iyo markii al-Shabaab xukunka haysay ayaa waddanka ku soo noqday si ay uga qayb qaataan dib-u-dhsika qaranka, ayuu sheegay safiirku.
"Si horumarinta loo dar-dar galiyo loogana soo kabsado labaatameeyadii sano ee xasilooni-darrada lagu waayay, ayaa Soomaaliya hadda ay u furan tahay in adduunyadu maal-gashato," ayuu yidhi Nuur.
Fursadaha Soomalaiya oo indhaha lagu hayo
HanVard Africa oo qaban-qaabinaya shirka ayaa rajaynaya in ay shirka soo xaadir doonaan tiro ka badan 150 ka qayb-galayaal ka kala imaanaya hay'daha caalamiga, iyo hay'adaha dawliga ah, wakiilo ka socda hay'adaha kaalmeeya maal-gashiga Afrika, hoggaamiyayaasha ganacsiga caalamiga, madaxada xukuumadda iyo wariyayaasha. Wufuudda shirka aaya bixinaya $500 oo doolar (42,200 oo shilinka Kenya ah) oo ah lacagta is diiwaan-galinta iyo $2,500 (212,00 oo shilinak Kenya) oo ah meel ay wax ku soo bandhigaan, sida uu sheegay maamulaha sare ee HanVard Hassan Noor.
Ilaa Arbacadii (22-kii May) shirku waxa uu soo jiitay 22 maal-galiye waxana is diiwaan-galiyay 55 bandhige iyo ergay, ayuu Nuur u sheegay Sabahi.
Ulajeedka shirka ayaa ah in la soo bandhigo fursadaha isla markaana lagu abuuro kalsooni maal-gashi oo lagu sameeyo Soomaaliya hadday ahaan lahayd heer gobol iyo heer caalamiba, ayuu yiri Nuur. Waxa kale oo looga hadli doonaa caqabadaha iyada oo lagu dhiirri-galinayo dib-u-habaynta looga baahan yahay si loo horamariyo fursadaha ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliya, ayuu yidhi. Maal-gashadayaasha ayaa sidoo kale baranaya hababka ugu haboon ee ganacsi lagu sameeyo iyo waliba kordhinta kobaca dhaqaalaha ee waddanka.
"In 20 sano ka badan, ayuu aduunku wuxa kaliya oo uu [Soomaaliya] ka haystay sawir dagaal, dhimasho, macaluul iyo cuduror," ayuu yidhi Noor. "Shirka ganacsiga ayaa ku yaboohaya fursad lagu soo bandhigo wajiga kale ee [Soomaaliya] iyo fursadaha ganacsi ee dalka."
Fursado shaqo oo loo helo dhallinyarada shaqo la'aanta ah
Maal-gashiga Soomaaliya ayaa laga yabaa in uu gacan ka geeysto yareenyna ammaan la'aanta waddanka mustqablka fog, sida uu sheegay Xoghayaha Guud ee Urur-goboleedka Horumarinta (IGAD) Danjire Mahboub Maalim. Xasilooni darrada dhaqaalaha iyo maqnaanshaha fursado shaqo ayaa ka qayb-qaatay in dhallinyaradau ay ku biiraan kooxaha argagixisada ah sida al-Shabaab, ayuu yidhi.
"Maal-gashiga Soomalaiya iyo soo saaridda fursadaha waddanka ku aasan ayaa ku yaboohi doona fursado shaqo kadibna dhallinyarada ka dhigaysa kuwo mashquulsan [iyo] walibana ka jeedinaya kuwa raba in ay shaqaalaystiistaan dhallinyarada camal la'aanta ah," ayuu yidhi Maalim, isaga oo intaas ku daray in faa'iidada wanaajinta ammaanku ay gaadhayso Bariga Afrika iyo adduunka oo dhan.
Labaatan sano oo colaad ah ahaa Soomaaliya waxa ay dhaxashay burbur baahsan oo dhinaca sharciga iyo kala danbaynta ah, ayuu sheegay Ibraahiim Rashiid Axmed oo ah la-taliye dhinaca horumarinta ahaana la-taliyihii hore ee Raiisul Wasaaraha Kenya Raila Odinga ee dhinaca Soomaaliya.
"Xaaladda ayaa ka dhigtay Soomaaliya meelaha ugu dhibaato badan ee ganacsi laga sameeyo laguna najaxo," ayuu yidhi. "Si kastaba ha ahaatee, kartida Soomaalida, u diyaarsanaanta ganacsiga iyo rabitaanka in ay guul gaadhaan [iyada oo ay jirto] xaalad adag ayaa shuclada ganacsiga ka dhigtay mid nool."
Tani fursad ayay u tahay adduunka oo dhan in ay ka qayb-galaan sababta oo ah Soomaaliya xaqiiqadii waxay noqonaysaa waddan dhaqaale xoogan leh wax ka yar 10 sano, ayuu yidhi Axmed.
"Axsaan iyo mahadnaq ayaad dadka ka helaysaa haddii aad garab istaagto saacadda ay baahan yihiin, haddana wakhti arintaas kaga fiican ma jiro," ayuu yidhi Axmed.
Suresh Aggarwal, oo ah maareeyaha Athi River Steel Plant Limited, oo ka mid ah maal-galiyayaasha shirka, ayaa sheegay in Soomaaliya ay siinayso fursad ganacsatada Kenya si ay howlahooda ugu balaadhiyaan meel ka baxsan xuduudka Kenya.
"Soomaaliya waa dariska Kenya habka ugu wanaagsan ee ay ku kaalmayn kartana waa in fursado shaqo ay siiso shacabka Soomaaliya iyada oo u sii maraysa maal-gashiga," ayuu yidhi. "Waxaa jira dareen [xaga] ammaanka ah, laakiinse fursad kasta oo maal-gashi khatarteeda ayay leedahay. Waxaan ku rajo wayn nahay in Xukuumadda Defaraalka Soomaaliya ay khatartaas ka dabaalan karto."
Shir labaad oo maalgashi ah ayaa la qaban doonaa badhtamaha Juune
Shirlabaad oo maal gashi, ammaan iyo kaabayaasha ee Soomaaliya ayaa lagu qaban doonaa Hoteelka Lacio Regency ee Nairobi 17-ka Juune.
Shirkan ayaa isu keeni dona doona madaxda xukuumadda faderaalka Soomaaliya, maamul-gobaleedka Puntland iyo hogaamiyaasha ganacsiga, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay sii daysay Amsas Management Consulting, taas oo shirka qabanaysa.
Shirka ayaa looga hadlayaa dhawr qaybood oo dhinacamaal-gashiga ah, kuwaas oo ay ku jiraan beeraha iyo xoolaha, saliida iyo gaaska, macdan qodidda, isgaadhsiinta, ammaanka, bangiyada iyo khidmooyinka lacagta iyo kaabayaasha.
"Maal-gashadayaasha ayaa la siin doonaa qaab la taaban karo oo lagu wajaho caqabadaha iyo fursadaha ka jira Soomaaliya iyo sida ay u egyahay cimilada maal-gashi ee xilligan lagu jiro soo kabashada Soomaaliya, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Shirka ayaa waxaa furaya Maalim oo IGAD ka socda. Wufuudda ka socota xubnaha IGAD ayaa bixinaya $250 (21,100 oo shilinak Kenya ah) si ay shirka u yimaadaan, wufuuda caalamiga ahna waxay bixinayaan $1,250 (105,000 oo shilinka Kenya ah).
January 31, 2014 @ 12:20:02PM
Waa fursad qiimo leh waxaanan jecelahay inaan ka qayb galo shirka lagu qaban doono magaalada Dubai bisha April sannadka 2014-ka. Fadlan ii soo dira tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan habka looga qayb galayo shirka.
May 26, 2013 @ 09:43:09AM
waa ii dheh ogeysiis oo radio muqdisho kabaxaayo sanadihii 1985 tii ilaa 1987, wax oo uu soo kordhinaayo maleh